Ndi ị maara na Vin Number na ị ụgbọala ma ọ bụ ụgbọala bụ ihe karịrị nanị a ụyọkọ odide eji ya iji chọpụta ị ụgbọala. Gị vin ọgụgụ bụ 17 digits mejupụtara akwụkwọ ozi na nọmba ndị pụrụ iche ka ụgbọ ala na i nwere ma ọ bụ na-atụle ịzụta. Site na-eme a vin nọmba Nchọgharị ị nwere ike Chọpụta ụgbọala azụ ebe na mgbe e arụpụtara na a otutu ihe dị mkpa na ozi.
Gị vin ọnụ ọgụgụ na ala ụgbọ ala gị dị ka a mkpịsị aka ebipụta ụmụ mmadụ, ọ dịghị ụgbọala abụọ nwere otu onye. Pụrụ iju gị anya ịchọpụta na ọ bụ ezie na ala ụgbọ ala gị bụ ebe a na United States ọ pụrụ ịbụ na e mere na Mexico, Canada ma eleghị anya ọbụna Ẹnam ekese niile si Japan, Germany, Korea ma ọ bụ ọtụtụ mba ndị ọzọ si gburugburu ụwa.
Mgbe ị na-agba ọsọ a vin nọmba (makwaara dị ka onye na akpaaka akụkọ ihe mere eme akụkọ) na-eweta ị na-eji ga-itapia na vin ọnụ ọgụgụ na-agwa gị ebe ụgbọala e wuru, onye emeputa bụ, ma ma ọ bụ na o nwere ntuziaka ma ọ bụ ike windows na akpọchi, engine size na ihe ụdị nnyefe. Ọzọkwa, mgbe ị na-agba ọsọ a vin nọmba Nchọgharị ị nwekwara ike chọpụta ihe ọmụma dị otú ahụ dị ka odometer agụ n'etiti nwe, ma ma ọ bụ ụgbọ ala mgbe e zuru, ma ọ bụrụ na ụgbọala ya mgbe a na a iju mmiri na ahụhụ mmebi, ma ọ bụrụ na e nwere ọ bụla ugbu a-echeta metụtara na kpọmkwem ụgbọala. Ị pụrụ ọbụna ịchọpụta ma ọ bụrụ na e nwere ego na ụgbọ ala, ọ bụrụ na ọ mgbe ọ bụla e repossessed, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ mgbe a ngụkọta ọnwụ site ihe mkpuchi ụlọ ọrụ.
Ego My Vin Number
Ya mere ugbu a, ị nwere ike ịjụ onwe gị, “olee otú m ego m vin nọmba”? Ọ dabara nke ọma na internet, ọ bụ pụtara mfe. Nzọụkwụ mbụ bụ na- vin nọmba nke ụgbọala. All ụgbọala na gwongworo nwere vin abanyeworị a obere mpempe metal na-akụtu na ọkwọ ụgbọala n'akụkụ na ị pụrụ ịhụ site na-achọ site n'ihu nke windshield. Na mgbakwunye, ụfọdụ na-emepụta na-etinye vin ọnụ ọgụgụ na n'ime nke ọnụ ụzọ, n'okpuru hundu na mgbe ụfọdụ nakwa na oche mkpuchi ma ọ bụ akpati. Otu ihe dị mkpa Cheta: ị pụrụ ịchọpụta na a di na nwunye nke ogwe na vin nọmba abụghị otu. Nke a adịghị abụchaghị na ụgbọala na-zuru. Ọ nwere ike ịbụ na ihe mberede na mkpuchi ụlọ ọrụ naanị kwere maka Mmanu akụkụ-enịm na ụgbọ ala kama ika ndị ọhụrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-abịa gafee a ụgbọala na ọ nwere niile dị iche iche vin nọmba na niile ogwe, gị mma nzọ bụ na-anọ n'ebe ahụ ụgbọala.
Ọzọ ọ bụ dị mfe dị ka na-aga gị na kọmputa na-aga online. E nwere ọtụtụ reputable ụlọ ọrụ ndị na-enye a ụgbọala vin ego. Chọta a vin nọmba ego ọrụ na youtrust ma ọ bụ ndị enyi gị nwere ike ikwu na nanị tinye vin ọnụ ọgụgụ n'ime ihe kwesịrị ekwesị igbe, ọ bụ na mfe. The nnọọ free VIN ndenye ego-na-emekarị vin decoders na-enye gị ihe ọmụma banyere ụgbọala na ngwá ọ na-wee na si emeputa.
Ọ bụrụ na ị na-eme a free vin nọmba search nke ga-egosi na ị na afọ, ime na nlereanya na engine na ndị ọzọ na ọmụma dị oké mkpa, i nwere ike na na a zuru ụgbọala akụkọ ihe mere eme akụkọ nke ga-ekpughe oké njọ n'ibu mbipụta, odometer nsogbu, ọ bụrụ na ụgbọala anọwo na ihe mberede na otú pụta.
Site ịlele na vin nọmba, ọ nwere ike ịzọpụta gị a otutu oge, isi ọwụwa na iru újú. Ndị mmadụ ga-bụghị mgbe niile-ekwu eziokwu mgbe ọ na-abịa na-ere ha na-eji ụgbọ ala. Site na-eme a vin nọmba ego, ọ pụrụ ime ka ndị niile dị iche na ụwa n'etiti inwe a ụgbọ ala na-ga-ejere gị ozi ọma, ma ọ bụ inwe a ụgbọ ala na-efu gị na a obere uba na na ị chọrọ, ị pụrụ tufuo.
Chọta Cheap Vehicle History Report Ebe a